Kessoo tekinoolojii kameeraa – Kutaa 2ffaa – Akkam Jirtuu? Nooraa!
Kessoo tekinoolojii kameeraa – Kutaa 2ffaa
Kutaa 1ffaa kessatti gosoota kaameeraa ilaalun keenya ni yaadatama,goosota jiran kessa adda kan taahan mini camera jedhamuun kan beekamandha isaanis sa’aatii harkaa , golgituu ijaa , ampulii, qubeessaaffa kessafi kan biraa kessatti tolfamuun kan gabaaf dhihaatandha warren kunis (rechargeable battery) kan of kessaa qabandha dabalataaniis kusaa odeffannoo MC kaardii kan fudhatanidha.
Keessoo mosaajii kameera maal qabachuu dandaaha ?
Haalluu fakkiif ifa naannoo to’achuun akka fakkin fakkii guutuu tahuu goodha, kunis bakka ifti gahaa hin jireetti baayyee bu’a qabessa.Fakkiin ifa guutuu argatees sirreefama haallutiin akka ijaaf tolutti qindaahaa jechuudha.
(True WDR, Digital WDR, Ultra WDR, View-DR )
Hirina qulqulinaa sababa ifa bayyee gadi bu’aan umamuf fireemota caccaban sirreessudhaan akka fakkii qulqulluu tahuu gochuun sirreessa.Kunis (noise reduction process )jedhamuun beekama kana jechuun noise reduction sagalee irraa addaa.
-Fakki qulqullessuun kuusaa odeffannoo irratti hanga odeffannoo xiqeessuun mijeessa.
-Fakkiwwan mul’atan qulqullessuun waan shakinu akka sirritti arginu godha.
-(2D DNR, 3D DNR )
Goosa ifaa namni ijaan arguu hin dandeenye kan (image sensor) kaameeraa hubachuu dandahuu jeechuudha, goosti kaameraa bayyeen (traditional illuminators) of keessaa qabu, kana jechuun bakka hundumaaf ni tahuu jechuu miti.
-Akkuma jijirama ifaatti of mijeessa
-Fakkiin akka garmalee hin addaannee godhee to’ata
-Fakkii ni qulqulleessa
Bara 2008 dhabata omishtoota kaameeraa egumsaa hojetan kannen akka Axis ,sony, Bosch bu’ureffame. Har’a dhabatoota bayyetiin simatamee hojirra oolera.
-Meeshaaleen eguumsaa (IP address) hojetan akka ulaagaa guutu malan guutan godheera.
-(Interoperability regardless of manufacturer) jechuunis kaameraa egumsaa dhabata addaa addaatiin omishamee bakka tokkotti dhufuun rakkoo tokko malee akka waliin hojetan gochudha.
IP66,IP67,IK10 (Weather proof and vandal proof)
–IP66 – Bishaan cobaan , itti facahuufi haalota biraatin akka kessa hin seennee ta’uusaa mirkanessa.
–IP67 – Bishaan kessa cubamuun kemikaala addaa kessa yeroo gabaabaf yoo sene bahee kan hojetu tahuusaa mirkaneessa.
–IK – balaa rukkuttaan cabsuuf yaalu akka irratti hirrawanneef jabaa tahuu isaa kan mirkanessudha.
Hanga ifaa image sensoorii kaameraa kessa seenu kan to’atudha. Kunis qulqulina vidiyoo (suur sagalee) kameeraan kuun waraabu irratti dhibbaa mataa isaa qaba.
Frame Rates :- Baayina fireemi kameeran safisaan warabu jechuudha, kunis vidiyoon warabamu gafa irra deebidhaan ilaalu akkataa inni tapachiisu harkifataa ykn saffisaa taaha jechuudha.
Edge/Local Recording :- kana jechuun haala ittin kaameraan odeffannoo kuusu yommu tahu,odeffannoo kana haala lamaan kuusu dandaaha inni jalqabaa gara nvr’ttii erguudhaan yommu tahu kan addaan cituun umamu yoo tahe kameerasun memori kaardii kan fudhatu yoo tahe achiratti odeffanno kuusu dandaaha jechuudha.
Kana jechuun kaamera qaamaan tutuqu cabsuf yaaluu halluu itti bifuufi yaalin balaa irraan gahuu godhamuu odeffannoo karaa ergaa gabaaba(sms) ykn email nu qabsisuu dandaaha jeechuudha.
Ifa karaa iris seenee to’achuun sur-sagaleen waraabamu qulqulina akka qabaatuu goodha , akka fakkeenyatti wantoota kameera dura saffissaan deeman kamiyyu qulqulinni isaa osoo hin hir’atin mijeessa jechuudha.
Gosti kaameraa vidiyoo kompreeshiinii qabuu gaarummaan isaa vidiyoo warabamee kessaati odeffannoo kamiyuu osoo hin hir’isiin hanga vidiyoo waraabamee xiqqeessa jechuudha.
Kkana jechuun kaameraa ykn nvr fayyadamnu kan kessaa qabu tahee bakka biraa tenye kallattidhaan waan kaameraa egumsaa irratti taaha jiru ilaalu dandeenya jechuudha. Gabaabamatti teekinoolojiin kaameraa eguumsaa keessa jira kana qofaa miti.
Kaameera egumsaa bituun dura
Ogessaa hojii kana wajjin wal-qabatu irratti gahuumsa qabu marisisuun baasi hin barbaachifne baasu isin oolcha.
Goosa teekinoolojii eegumsaa kamitti akka dhimmi baatan beekunis barbaachisaadha (Analogimoo IP) jechuudha.
Bakka kaameera kun kaahamu siritti adda baafachu(sight survey) gochuun barbaachisaadha,kunis akka bu’aatti gosa kaamera indoor ykn outdoor bakka itti fayyadamtan akka qulquleffattan isin godha.
Bu’aa analog kaameraa
-Addaan cicituun osoo hin umamin yeroo dheeratiif hojechuu ni dandaaha, maalif ? Gara kaameera kallattiin network pirotokoolin deemu waan hin jirreef ,network inteerapshinii umamu hin jiru.
-Bittaadhaaf mijataaf baayyee mi’aa miti
-Kameeraan analogi netwoorkii waliin waan wal hin qunnamneef sarara shiboo analoogi waan fayyadamuuf (Hack proof )
Kameeraa qofaatti fayyadamuu hin dandaahamu dirqama DVR bitamu qaba.
Kaameraa irratti odeffannoo waraabuun hin dandaahamu sababi isaas meemori kaardi waan hin fudhaneef
Kameeraa qofaatti waan baayyee mijeessuu hin dandeenyu.
POE teekinooloji waan hin qabneef saraara human elektrikaa dirqama dirirsuu qabna.
Bu’aa IP kaameraa
-Qobaatti bituu ni dandeenya memoori kaardii irratti akka waraabuu gochuun ni dandahama
-Qobaatti to’achuun ni dandahaama
-Cloud access kan qabu yoo tahee bakka birallee taahudhaan ilaalun ni dandahama.
-Haalluufi qindeffama addaa addaatin mijeessun ni dandahama
-POE waan qabuuf human elektrika qobaatti nun barbaachisu.
Kaameeraan IP jeequmsi netiworki yoo umamee jeqamuu ni dandaaha.
Yaalii cabsaanii seenuu irratti gegefamuu dandaaha.